Adria Arjona – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
6 Underground (2019) Unicode အားလုံးစောငျ့နတေဲ့deadpoolမငျးသားရဲ့2019ထှကျကားသဈလေးလာပါပွီ ကမ်ဘာကွီးရဲ့အရှုပျတှကေိုရှငျးပေးခငျြတဲ့သူတဈယောကျရဲ့ ဇာတျလမျးကိုရိုကျကူးထားတာပါ တာကစ်စတနျကိုအုပျခြုပျနတေဲ့သူသေ သှားတော့သူ့သားနှဈယောကျထဲက မကောငျးတာတှကေိုလုပျတဲ့လူကသူ့ညီကိုဖမျးထားပွီးတော့ နိုငျငံကိုသိမျးယူထားပါတယျ နိုငျငံတှငျးမှာလညျးဆူပူမှုတှရေော ဂတျဈနဲ့တိုကျခိုကျမှုတှကေိုပါလုပျတဲ့သူတဈယောကျပေါ့ အဲဒါကိုမွငျပွီးကယျတငျခငျြတဲ့ryan reynolds တဈယောကျလူတှလေိုကျစုပွီးကဖမျးခံထားရတဲ့ ညီကိုကယျတငျဖို့လုပျပါတော့တယျ သူတို့အဖှဲ့ထဲမှာစညျးမြဥျးတဈခုရှိပါတယျ ကိုယျဘယျသူဘယျဝါဆိုတာအခငျြးခငျြးတောငျမသိကွတာပါ နာမညျကအစဘာဆိုဘာမှမသိကွတဲ့ လူတှစေုပွီးတော့ဘယျလိုတှကေယျဆယျရေးလုပျကွမလဲဆိုတာ…. actionကွီးပဲမဟုတျပဲဟာသလေးတှပေါနှောထားတော့ တကယျကိုကွညျ့လို့ကောငျးတဲ့ဇာတျကားတဈကားဖွဈမှာပါ Credit Review ဒီ ဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Htet Thura Aye ဖွဈပါတယျ Zawgyi အားလုံးစောင့်နေတဲ့deadpoolမင်းသားရဲ့2019ထွက်ကားသစ်လေးလာပါပြီ ကမ္ဘာကြီးရဲ့အရှုပ်တွေကိုရှင်းပေးချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကိုရိုက်ကူးထားတာပါ တာကစ္စတန်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူသေ သွားတော့သူ့သားနှစ်ယောက်ထဲက မကောင်းတာတွေကိုလုပ်တဲ့လူကသူ့ညီကိုဖမ်းထားပြီးတော့ နိုင်ငံကိုသိမ်းယူထားပါတယ် နိုင်ငံတွင်းမှာလည်းဆူပူမှုတွေရော ဂတ်စ်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါလုပ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့ အဲဒါကိုမြင်ပြီးကယ်တင်ချင်တဲ့ryan reynolds တစ်ယောက်လူတွေလိုက်စုပြီးကဖမ်းခံထားရတဲ့ ညီကိုကယ်တင်ဖို့လုပ်ပါတော့တယ် သူတို့အဖွဲ့ထဲမှာစည်းမျဉ်းတစ်ခုရှိပါတယ် ကိုယ်ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာအချင်းချင်းတောင်မသိကြတာပါ နာမည်ကအစဘာဆိုဘာမှမသိကြတဲ့ လူတွေစုပြီးတော့ဘယ်လိုတွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ကြမလဲဆိုတာ…. actionကြီးပဲမဟုတ်ပဲဟာသလေးတွေပါနှောထားတော့ တကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်မှာပါ Credit Review ဒီ ဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Htet Thura Aye ဖြစ်ပါတယ်
IMDB: 6.1/10 60500 votes